Fianarana maimaimpoana any Italia Mpianatra Malagasy iray no nitsikian�ny vintana
Mpianatra afaka bakalorea 3% ihany no tafiditra amin’ny oniversite
Ambany dia ambany ny taham-pahafaham-pidiran’ny mpianatra malagasy afaka bakalorea eto amintsika ho amina rafitry ny oniversite eto Madagasikara raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra amina oniversite tsy miankina iray etsy Ambodifilao nandritry ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny fisokafan’izy ireo omaly.
Seces Antananarivo Hanamafy fitakiana raha tsy afa-po
Nanao fivoriambe teny amin’ny oniversiten’Antananarivo eny Ankatso omaly ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka (Seces), sampana Antananarivo, nanapahan’izy ireo hevitra mikasika ny olana mianjady amin’ny fampianarana ambony ankehitriny.
Salon des Etudes Internationales Lalam-piofanana 1000 no azo isafidianana
Tena nahavory tanora marobe tokoa hatramin’ny omaly andro voalohany ilay “Salon des études Internationales” karakarain’ny Madajeune etsy amin’ny hotel Cartlon Anosy. Sekoly avy amina firenena maro toa an’i Alemana,
Kaonfederasionin’ny Sempama Efa “loza mamotika” ny aretin’ny fanabeazana
Sarinteny tsy sarinteny omaly no nanaingon’ny avy eo anivon’ny kaonfederasionin’ireo sendikan’ny mpampianatra eto Analamanga (kaonfederasionin’ny Sempama) nentina nilazana fa efa faran’izay marary, na loza mamotika (phase finale) ny fanabeazana eto Madagasikara ankehitriny tetsy amin’ny Koots food Mahamasina.
« Cours » fanampiny ho an’ny mpianatra Mandeha tsara, hoy ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena
Kely sisa dia hamarana ny telo volana faharoa indray isika ho an’ity taom-pianarana 2017-2018 ity. Miha antomotra hatrany ny fotoana hanatanterahan’ny mpianatra ireo fanadinam-panjakana maro isan-tsokajiny izay tena mila fiomanana tokoa.
UPRIM Hatao nomerika ny fitaovana, hisokatra ny Master II
Hatao nomerika avokoa manomboka amin’ny volana martsa na aprily ho avy izao ireo karazam-pitaovana rehetra hampiasaina eo anivon’ny sekoly ambony UPRIM etsy Andavamamba.
I Madagasikara aty amin�ny kaontinanta Afrikanina no anisan�ny nahazo ny laharana voalohany tamin�ireo mpianatra mahay indrindra nandritra ilay fifaninanana hidirana any amin�ny Oniversitem-panjakana �Bolona Business School� any Italie.
Tamin’ny alalan’ny skype no nanatanterahana ny fifaninanana ny 31 septambra lasa teo izay nivaly ny faran’ny volana oktobra lasa teo. Njarizafy Odilon, 23 taona, mpianatry ny sekoly ambony ISFPS Leader etsy 67 ha, tantanan’Andriamatoa Tsimondreke Mahasoa no nibata ny fandresena. Taona fahatelo ao amin’ity sekoly ambony iray ity izy nanaraka ny lalam-piofanana “gestion et management”. “Business and corporation Management” kosa no lalam-piofanana arahiny manomboka izao hakany ny mari-pahaizana Master I. Ny 25 novambra ho avy izao no hiala eto Madagasikara ny tovolahy raha ny fiandohan’ny volana janoary taona 2017 kosa no hanomboka ny fianarany. Herintaona moa no faharetan’ny fianarany any an-toerana handraisany vatsim-pianarana 14.800 Euros isam-bolana hiantohana trano, fiara ary sakafo.